The 25 imidlalo best of 2015: ezinhlanu - Izindaba Rule
The 25 imidlalo best of 2015: ezinhlanu
Lesi sihloko osesikhundleni “The 25 imidlalo best of 2015: top five - izilo hulking nezimfuno amaqhawe” lalotshwa Keith Stuart kanye Rich Stanton, ngoba theguardian.com ngoLwesihlanu 18th December 2015 10.21 UTC
Lapha benjalo: the ezinhlanu imidlalo best of 2015. Ngemva kwesonto ingxoxo, impikiswano futhi bengakholwa, sifika ekupheleni kohambo lwethu nge - Kuthi ngokufanelekile - imidlalo emihlanu ukuthi kukhona mayelana nezimfuno amaqhawe.
Kwaphinda lokho, thina ngokusekelwe kuhla lwethu on leziqu empeleni Guardian imidlalo abalobi wadlala kunazo kulo nyaka, futhi bebonke siye kungenzeka ukuthi ulahlekelwe izinkulungwane zamahora lezi ezamehlela - futhi uyoqhubeka enza kanjalo ibe 2016.
Zonke lezi okufakiwe ukukhuluma of ukuvelela enkulu Ukukhalipha lobuchwepheshe esivela zanamuhla imidlalo umkhakha. Nakuba lokhu iyithuluzi othambekele ISIFISO, kufanele ngezinye izikhathi ayeke futhi aqaphele okuthile: lena isikhathi esimangalisayo ukuba abe Gamer.
5. Iwa 4 (PS4 / Xbox One)
Umbono enhle post-apocalypse ... Fallout 4.
Iwa 4 Waba yini ebesiyilindele. The Commonwealth, lisekelwe kulokho sebenzisa be-Boston, kuyinto umbono uncommonly enhle post-apocalypse. Egcwele izinsalela engumuntu izakhiwo esedlule, ngokwabo elaligcwele nswi crannies nesithembiso engcebweni, umane nokuhamba sesiphila zamehlo. A yingozi nhliziyonye, sibonga pulpy sci-fi x combat okungenasiphelo timphawu tekubhala uhambo Wanderer sika. Umgomo umdlalo roleplaying ukwenza umdlali ukutshala kwenye emhlabeni, futhi adale izindaba zabo siqu ngaphakathi it - Fallout 4 Ngokuqinisekile odlulela inkinobho.
Fundza Fallout 4 ukubuyekeza
Umdlalo nokuqukethwe-rich kakhulu Capcom owake wakhiqizwa ... Monster Hunter 4 Ultimate.
Monster Hunter 4U kuyinto professional abanolwazi kulolu hlu, entry zakamuva ochungechungeni ukuthi abethelwe we-Mechanics core okuqala futhi uye iterated kusukela. Kodwa MH4U kudlulela ngalé intuthuko elula, futhi zibe enikeza yini mhlawumbe umdlalo nokuqukethwe-rich kakhulu Capcom owake kukhiqizwa. Woza ngoba esivusa amadlingozi monster izimpi ngobuciko combat, zisalele izingubo emihle ungenza aphume izikhumba zazo, futhi ikhukhuleke zobungane yabazingeli Ukubambisana online.
Hideo Kojima uyakhothama out ... Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.
swansong Hideo Kojima sika zithathelwe Saga okuqhubekayo ngokumuka kwakhe ngenxa Konami. A pity ngoba MGSV: The Phantom Pain waletha close emangalisayo eliyingqayizivele, uchungechunge evelele ukuthi engashiyi owalandela osobala. Kojima Productions sisentshenzwa umnyombo uhlelo yamathuluzi e-MGS sika ngobuqili ukuze uvumelane uhlobo olusha evulekile-world: olujiyile, imininingwane-ocebile, kokubili inkundla inkundla. Izingxenye fun kakhulu, like the Fulton, ukondla singene metagame zikhuluphele-out of Mother Base - zakhela impi Snake Solid Uyakuchitha 1987 sika Metal Gear. Lona ukuphela Hideo Kojima futhi Metal Gear Solid, zihambisana libuyiselwa ekuqaleni. Kodwa yeka indlela ukuya.
Fundza Metal Gear Solid ukubuyekeza V
State of the design art game ... Witcher 3.
Izwe big ukuze ungalahlekelwa uzicabange izinsuku, umlingisi engalolongekile-lizwakalise lead ngubani ngandlela-thile kugcina amahlaya esintwini, kanye menagerie izilo kabuhlungu sikhumbuleke futhi abamelene - Witcher 3 konke ungase ufune yizwe evulekile Ekwenza Umlingiswa adventure. Kuthatha eqanjiwe yayo sina, kodwa akunjalo ngempela ukuthi ungowokuqala owaba side quests kwenzeke yonkana iwukusiza isalukazi uthole ozithandayo ibhodwe lakhe. Lena isimo design art kuqhakanjiswe game.
Funda isibuyekezo Witcher
Izwe ligcwele izilo ... Bloodborne. Photograph: Sony
Umqondisi Bloodborne sika Hidetaka Miyazaki akwakhi game imihlaba, akha game izinhlelo kanye esenza izwe kanye nomlando wayo abaseduze kwabo. Imigwaqo ka Yharnam basuke eqa izilo futhi sinqunywe abazingeli abafana nawe – abasinda ngegazi avamile inkonzo. Kodwa Yharnam kuphela isango lokuthola kuhlukunyezwa Eldritch, futhi izinsalela empeleni aphulwe imiphakathi ngibeleselwa abangakhathaleli 'Abakhulu.'
Lokhu mythos ocebile ihlanganisa nge twist action-ngamakhasimende on third-umuntu combat, okuyinto yakhelwe uchuku unomphela kusukela isidlali kanye nokusetshenziswa trick izikhali – inkemba banana oba uma kuqhathaniswa nokuvuna ngesikela, uthi. I werewolves hulking lamanyala nobuchopho-abancela uyobaqhaqha wena ahluke ngomzuzwana kungakhathaliseki, kodwa kungcono enkulu boss zokuxabana ukumphakamisa lesi simiso empini sonke isikhathi okukhulu isimo.
Lovecraft futhi okukhulu ngokunemba combat akuzona wonke umuntu, futhi Bloodborne kuyinselele ezinzima ivuleke. Kodwa-ke, 2015 ezibaluleke kakhulu AAA ukukhululwa sokubonisa indlela engcono-ukudidiyela eziningi, abaningi uphiko izingxenye umdlalo wevidiyo ibe iphakethe leletsa umcondvo lobumbene. izwe Bloodborne sika yakhiwe phezu kwegazi, ngokoqobo futhi njengesifenqo, futhi kuzo zonke izingxenye design ogeleza usuka le.
Funda isibuyekezo Bloodborne
Ahloniphekile okukhulunyiwe - imidlalo nje ngiphuthelwe
Cybele: tale Nina Freeman sika kwakhe unezinto ezithakazelisayo ukuze uthi uthando kanye nobudlelwano ngenkathi udlala inthanethi.
Volume: Robin Hood ihlangana Metal Gear Solid kule minimalist phazili uhlakaniphile stealth, ozongena ukuthola i sikhathi on PlayStation VR.
Yoshi sika Woolly World: Enye wezandla adventure amahle, okulandelayo kusukela luscious Kirby sika Epic ntambo.
Star Wars impi: Limited mayelana ukujula ebangeni lelilandzelako, kodwa EA Dice ithumba ngokuphelele ukubukeka, ukuzwa umoya amabhayisikobho.
Izinsika Eternity: owalandela Obsidian Entertainment elingokomoya Classic action RPG Baldur sika Gate and Icewind Dale Kunjengoba ejulile, kuhlanganyele futhi esibhalwe kahle njengoba abalandeli safuna ngenkani.
← Star Wars: The Force ongenza abantu basabele ngendlela kuqala [VIDEO] Ubungaphendula Pee In Amasokisi Your To Shaja ifoni yakho? →